Namoaka mpamily video ho an'ny Linux ny NVIDIA | ubunlog
Namoaka mpamily video ho an'ny Linux ny NVIDIA
Darkcrizt | 12/05/2022 19:40 | About us
vao haingana Nvidia navoaka amin'ny alalan'ny dokam-barotra dia nanapa-kevitra ny hamoaka ny kaody amin'ireo modules kernel rehetra omena ao amin'ny suite-nao amin'ny mpamily video ho an'ny Linux.
Ny code navoaka dia navoaka teo ambanin'ny fahazoan-dàlana MIT sy GPLv2. Ny fahafahana mamorona maody dia omena ho an'ny maritrano x86_64 sy aarch64 amin'ny rafitra mihazakazaka Linux kernel 3.10 sy vaovao kokoa, na dia mijanona ho an'ny Nvidia aza ny tranomboky firmware sy mpampiasa toy ny CUDA, OpenGL, ary Vulkan.
Andrasana ny famoahana ny code mitarika amin'ny fitomboana lehibe momba ny fampiasana ny GPU Nvidia amin'ny rafitra Linux, manatsara ny fampidirana miaraka amin'ny rafitra miasa sy hanamora ny fanaterana mpamily sy ny olana debug.
Ny namorona ny Ubuntu sy SUSE dia efa nanambara ny fananganana fonosana miorina amin'ny modules misokatra.
Ny fananana maody misokatra dia hanamora ihany koa ny fampidirana ireo mpamily Nvidia amin'ny rafitra mifototra amin'ny fananganana tsy manara-penitra amin'ny kernel Linux. Ho an'ny Nvidia, ny loharanom-baovao misokatra dia hanatsara ny kalitao sy ny fiarovana ny mpamily Linux amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny fandraisana anjaran'ny vondrom-piarahamonina sy ny fahafahan'ny famerenana ny antoko fahatelo sy ny fanaraha-maso tsy miankina.
Marihina fa ny fototry ny loharanom-baovao misokatra dia ampiasaina miaraka amin'ny fananganana mpamily proprietary, indrindra indrindra, ampiasaina amin'ny sampana beta 515.43.04 navoaka androany.
Amin'ity tranga ity, ny trano fitehirizam-bokatra mihidy no fitahirizana lehibe ary havaozina ny fototry ny kaody loharano misokatra ho an'ny dikan-teny tsirairay amin'ny mpamily manana endrika fiovam-po aorian'ny fanodinana sy fanadiovana. Tsy omena ny tantaran'ny fiovan'ny tsirairay, fa ny fanoloran-tena ankapobeny ho an'ny dikan-tenin'ny mpamily tsirairay (ny code modules ho an'ny mpamily 515.43.04 dia navoaka amin'izao fotoana izao).
Na izany aza, manana fahafahana mametraka fangatahana ny solontenan'ny vondrom-piarahamonina kisendrasendra mba hampiroboroboana ny fanamboaranao sy ny fanovana code module, fa ireo fiovana ireo dia tsy ho hita taratra ho fiovana misaraka ao amin'ny tahiry misokatra, fa aloha dia hampidirina ao amin'ny trano fitehirizana lehibe mihidy ary avy eo dia nafindra niaraka tamin'ny fanovana hafa hanokatra. Ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana dia mitaky ny fanaovan-tsonia fifanarahana momba ny famindrana ny zon'ny tompon'ny kaody nafindra amin'ny NVIDIA (Contributor License Agreement).
Ny code module kernel dia mizara roa: singa mahazatra tsy mifamatotra amin'ny rafitra fiasana, ary sosona iray hifandraisana amin'ny kernel Linux. Mba hampihenana ny fotoana fametrahana, ny singa mahazatra dia mbola atolotra amin'ny mpamily NVIDIA tompon'andraikitra ho toy ny rakitra binary efa voaomana mialoha, ary ny sosona dia tafangona amin'ny rafitra tsirairay, amin'ny fiheverana ny dikan-kernel amin'izao fotoana izao sy ny fanamafisana misy. Ireto modely kernel manaraka ireto dia omena: nvidia.ko, nvidia-drm.ko (Manager Rendering Direct), nvidia-modeset.ko, ary nvidia-uvm.ko (Fahatsiarovana Video Mitambatra).
La Ny fanohanana ny andiany GeForce sy ny GPUs amin'ny toeram-piasana dia heverina ho kalitao alpha, fa ny GPU natokana mifototra amin'ny maritrano NVIDIA Turing sy NVIDIA Ampere ampiasaina ao amin'ny Ivotoerana Data momba ny fikajiana parallel sy ny fanafainganana ny angona (CUDA) dia tohana tanteraka, voasedra tanteraka ary mety hampiasaina amin'ny tetikasa orinasa. mpamily fiara).
stabilization ny fanohanan'ny GeForce sy ny GPU ho an'ny toeram-piasana nomanina ho an'ny dikan-teny ho avy izy io. Amin'ny farany, ny haavon'ny fahamarinan-toeran'ny loharano misokatra dia ho entina amin'ny fanjakan'ny mpamily tompona.
Amin'ny endriny ankehitriny dia tsy azo atao ny fampidirana ireo maody navoaka ao amin'ny kernel lehibe, satria tsy mahafeno ny fepetra takian'ny kernel amin'ny fomba fanodinana sy ny fivoriamben'ny maritrano izy ireo, fa Nvidia dia mikasa ny hiara-hiasa amin'ny Canonical, Red Hat ary SUSE hamahana ity olana ity ary hampitony ny interface programming controller. Ho fanampin'izany, ny kaody navoaka dia azo ampiasaina hanatsarana ny mpamily fototra Nouveau open source, izay mampiasa ny firmware GPU mitovy amin'ny mpamily tompony.
farany raha ianao liana hahafantatra bebe kokoa momba izany, azonao atao ny manamarina ny antsipiriany ao ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » General » About us » Namoaka mpamily video ho an'ny Linux ny NVIDIA
Raha mampiasa PostgreSQL ianao dia tsy maintsy manavao ny kinova vaovao izay manafoana ny vulnerable